EA027 - အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် GPS တည်နေရာရှိသောအိတ်ဆောင် Personal SOS Alarm မလိုအပ်ဘဲ Sim Card မလိုအပ် - OMG Solutions
၁။ သီးခြားလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုသည်၊ နှိုးစက်သည်အမြင့်ဆုံး decibel နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အသံလွှင့်သည့်အသံကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
၂။ alarms ကို“ PPsafety” အပလီကေးရှင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။ အချိန်နှင့်အမျှအချိန်ကာကွယ်မှု၊ လျင်မြန်သောအချက်ပြမှု၊ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့်ပျောက်ဆုံးမှုရှာဖွေခြင်းစသည့်အချက်ပြမှုများ၏ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။
3. IOS ရော Android အတွက်ပါလိုက်ဖက်ညီပါတယ်။
4. အခမဲ့ APP download လုပ်ပါ။
အရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအတွက် 5. 120DB ကျယ်သောနှိုးဆော်သံဥ။ ။
၆။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ GPS ခြေရာခံခြင်း။
၇. Bluetooth7ပါ ၀ င်သည်။
ပါဝါအားသွင်း: DC က 5V
အချိန်အားသွင်း: 30 မိနစ်
standby အချိန်: 30 နေ့ရက်များ
လက်စွပ်အချိန် - 45 မိနစ်
ဘက်ထရီ: 140Mah ပိုလီမာဘက်ထရီ
ရရှိနိုင်အရောင်: ပန်းရောင်၊ အစိမ်း၊ မီးခိုးရောင်
ထုတ်ကုန်အတိုင်းအတာ 46 * 46 * 14.8mm
ပွင့်လင်းပတ်ဝန်းကျင်, အမြင့် DB Alarm ကိုသုံးပါ
ဥပမာအားဖြင့်၊ သူစိမ်းတစ်ယောက်ကမင်းကိုအမြီးချည်ထားတဲ့အခါ။ သင် pin ကိုဆွဲထုတ်နိုင်သည်၊ နှိုးစက်သည်ကြိမ်နှုန်းမြင့်နှိုးစက်သံကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အချက်ပေးမှုသည်သင်၏အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့အကူအညီတောင်းခံမည့်စာကိုပို့ပေးလိမ့်မည်။
8208 စုစုပေါင်း Views စာ3Views စာယနေ့တွင်